नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा फेरि समस्या- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
चैत्र १९, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — बुधबार नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा फेरि समस्या देखिएको छ । कहिले अर्डर गरेको कारोबार नदेखाउने त कहिले धेरै देखाउने समस्या आएको हो । प्रणालीमा समस्याका कारण लगानीकर्ताले एक घण्टा कारोबार गर्न पाएनन् ।
पछि समस्या समाधान भएको भन्दै नेप्सेले कारोबार सुरु गरेको थियो । क्षतिपूर्तिस्वरूप नेप्सेले उक्त दिन एक घण्टा कारोबार समय बढाएर ४ बजेसम्म बजार खुलाएको थियो । नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा समस्या आउनु नयाँ होइन । ०७५ कात्तिक २० देखि नेप्सेले पूर्ण स्वचालित विद्युतीय कारोबार सुरु गरेयता सिस्टममा समस्या आएकै कारण पटक–पटक कारोबार अवरुद्ध हुँदै आएको छ । बुधबार पनि सोही अवस्था दोहोरिएको धितोपत्र ब्रोकरले बताएका छन् ।
नेप्सेले भने यो सामान्य समस्या भएको दाबी गरेको छ । एकैपटक एनआईसी एसिया लघुवित्तको सेयर कारोबारका लागि करिब ३२ हजार वटा अर्डर परेपछि सिस्टममा समस्या देखिएको स्रोतले बताएको छ । बुधबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब साढे ४३ अंकले बढेर २ हजार ६ सय १९.०२ विन्दुमा उक्लेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से १.६८ प्रतिशतले बढेको हो । उक्त दिन कारोबारमा आएका मध्ये ट्रेडिङबाहेक सबै उपसमूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्सेमा उच्च वृद्धि भएको हो । ६७ हजार १ सय ४८ कारोबारबाट २ सय ९ वटा कम्पनीका १ करोड १२ लाख ८१ हजार ६ सय २५ कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचमा ६ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम केही कम हो । मंगलबार ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।
नेप्सेको वर्गीकरणमा ‘क’ वर्गका कम्पनीको सेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक १.६४ प्रतिशतले बढ्यो । व्यापारमा रहेका सबै कम्पनीको सेयर कारोबार मापक फ्लोट परिसूचक १.९ प्रतिशतले बढेको छ । नेप्से परिसूचक बढेसँगै सेयर बजारको आकार कुल बजार पुँजीकरण पनि बढेर ३६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । सो दिन कारोबारमा आएका मध्ये व्यापार उपसमूहबाहेक सबै समूहका परिसूचक बढे । व्यापार समूहको परिसूचक २.२७ प्रतिशतले घटेको छ । सेयर मूल्य बढ्ने उपसमूहमध्ये निर्जीवन बिमाको परिसूचक सबैभन्दा धेरै २.६२ प्रतिशतले उकालो लागेको छ ।
यस्तै, बैंकिङ समूहको परिसूचक २.३१, होटल एन्ड टुरिजमको १.६, विकास बैंकको १.६८, जलविद्युत्को १.३९, वित्त कम्पनीको ०.८, उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको ०.५८, अन्यको १.३३ र लघुवित्त उपसमूहको ०.५७ प्रतिशतले बढेको नेप्सेले जनाएको छ । सो दिन जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक ०.९८, सामूहिक लगानी कोषको ०.८९ र लगानी उपसमूहको परिसूचक १.७२ प्रतिशतले बढेको छ ।
प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०७:१८
म्याग्दी — नारच्याङमा निर्माणाधीन मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजनाका १२ मजदुरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कोरोना अस्पतालमा लक्षणसहित उपचार गर्न गएका १० जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
उनीहरूकै कन्टयाक ट्रेसिङमा परेका ७६ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा बुधबार १२ जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
सुरुमा संक्रमण पुष्टि भएका ५ मध्ये ४ भारतीय र एक जना नेपाली थिए । बुधबार संक्रमण पुष्टि भएकाहरूमा एक जना भारतीय छन् र अरू नेपाली छन् । स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख एकनारायण लम्सालले नारच्याङमा एक सातामा १६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताए । जिल्लामा हालसम्म २ हजार ५ सय ३० जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकामा ५७ महिलासहित २ सय ४९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै पोखरामा केही सातायता कोरोना संक्रमण पुन: बढेको छ । जाँच गराउनेमध्ये फागुनमा दैनिक औसतमा १२ जनामा संक्रमण पुष्टि हुनेमा चैतमा उक्त संख्या दैनिक १९ पुगेको महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । सोमबार ३२ जनामा संक्रमण पाइएकामा मंगलबार ३६ जनामा पुष्टि भएको छ ।
बुधबार पनि पोखराका विभिन्न वडामा गरी २३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । एक/दुईबाहेक अधिकांश संक्रमित महानगरभित्रकै रहेको महाशाखाका अधिकृत हरिलाल आचार्यले बताए । ‘चैत लागेसँगै कोरोना संक्रमण पनि बढेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार माघमा दैनिक १७, फागुनमा १२ संक्रमित औसतमा हुने गरेकामा चैतको १८ दिनसम्मको विवरणमा दैनिक १९ पुगेका छन् ।
पोखरामा बुधबारसम्ममा ८ हजार ३ सय ६३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । अधिकांश निको भएका छन् । प्रदेश सरकारको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अहिले पोखराका १२ जना आइसोलेसनमा छन् भने अन्य होम आइसोलेसनमा छन् ।
‘कोरोना जोखिम बढ्दै गएको छ,’ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विकास गौचनले भने । पोखरा महानगरपालिकाले कोरोनाबाट मृत्यु भएका १ सय ९७ जनाको शव व्यवस्थापन गरेको छ । कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेमा महानगरभित्रकै १ सय २१ र अरू बाहिरी जिल्लाका रहेको आचार्यले बताए ।
प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०७:१२
हिमपात नरोकिँदा ५ हजार चौपाया जोखिममा
कहाँ पुग्यो रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया ?
दबाब थेग्न नसकेपछि सार्वजनिक सवारीमा जोर–बिजोर हट्यो
फेब्रुअरी दोस्रो सातासम्म रेल सेवा उद्घाटन
खर्च गर्ने सरकारलाई नै बढी बजेट : अर्थमन्त्री शर्मा
उद्योगीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछ्नु न्यायोचित हाेइन- सिमेन्ट उत्पादक संघ